Iimpawu, imibala kunye nemvakalelo | Martech Zone
Iimpawu, imibala kunye nemvakalelo
NgoLwesithathu, Meyi 8, 2013 Douglas Karr
Ndingumfunxeli we umbala we-infographic kwaye oku infographic evela kwiNkampani yeLogo ilungile.
Oososayensi bafunda indlela esabela ngayo kwimibala iminyaka emininzi. Imibala ethile isenza sizive ngendlela ethile ngento ethile. Logama umyili eyazi ukuba yeyiphi le mibala kunye neemvakalelo, umyili unokusebenzisa olo lwazi ukunceda ukubonisa ishishini ngendlela eyiyo. Le ayisiyomithetho inzima kwaye ikhawulezayo kodwa abayili abakhaliphileyo basebenzisa ulwazi ukuze baxhamle abathengi. Le infographic yolonwabo ibeka iimvakalelo kunye neempawu ezaziwa kakuhle njengeempawu ezaziwayo. Isayikholoji yembala inye kuphela yinxalenye yepuzzle kodwa ndicinga ukuba uyakuvuma ukuba yinxalenye ebaluleke kakhulu yayo.
Abantu ngaphezulu kweZithuba, aBantu ngaphezulu kweZiphatho
UkuThengisa ngobuninzi xa kuthelekiswa noBuqu